Iska Ilaw Murugadii Arsenal Ee Ay Chelsea Kala Kulantay, Dalalka Turkey, France Iyo Austeria Oo Guushii Blues Ee Europa League Looga Dabaal Degay- Siday Wax U Jiraan? - Gool24.Net
Iska Ilaw Murugadii Arsenal Ee Ay Chelsea Kala Kulantay, Dalalka Turkey, France Iyo Austeria Oo Guushii Blues Ee Europa League Looga Dabaal Degay- Siday Wax U Jiraan?
Guushii ay xalay Chelsea ka gaadhay finalkii Europa League waxay yeelatay saamayn ka badan intii la arkayay, waxaana jira saddex kooxood oo wadamada Yurub ka dhisan oo Chelsea ula dabaal degay guushii Europa league.
Haddii ay Chelsea murugo wayn ku abuurtay kooxda ay isku dalka iyo magaalada yihiin ee Arsenal, waxaa guushii Blues looga dabaal degay wadamada Turkey, France iyo Austria oo ay saddex kooxood oo ka tirsani faa’iido ka heleen guusha Chelsea.
Chelsea waxay guushii xalay iyada lafteedu ka heshay faa’iido aan ahayn ku guulaysiga koobka oo kaliya, maadaama oo ay ku biirtay kooxaha Pot1 ee hogaamin doona isku aadka Champions League.
Chelsea ayaa xili ciyaareedkii kooxdeeda sida ugu quruxda badan ugu soo gaba gabaysay kadib markii ay 4-1 ku khaarajiyeen Arsenal oo u dagaalamaysay guusha koobkan iyo in ay Champions League ugu soo baxdo.
Haddaba maxay yihiin sababaha keenay in guushii Chelsea looga dabaal degay wadamada Turkey, France iyo Austria?
Guushii Chelsea ee Arsenal ee finalkii Europa league waxay sharci ahaan saamayn ku yeelatay kooxaha Olympique Lyon oo France ah, Istanbul Basaksehir oo Turkey ka dhisan iyo waliba kooxda Auteria ee LASK Linz.
Arinta kowaad ee ugu muhiisan ayaa ah in kooxda Olympique Lyon ay u soo baxday tartanka xiisaha badan ee Champions League waxayna uga mahad celinaysaa guusha ay kooxda Chelsea ka gaadhay Arsenal.
Sharcigii sanadihii ugu danbeeyay ee UEFA ayaa sheegaya in kooxda ku guulaysata Europa league ay si toos ah ugu soo baxayso heerka Groupyada Champions League laakiin Chelsea waxay horeba booskeeda Champions League ugu xaqiijisatay afartii kaalmood ee sare ee ay Premier League kaga soo baxday.
Kooxda Olympique Lyon ayaa kaalinta saddexaad kaga dhamaysatay horyaalka France, waxayna seegtay in ay u soo baxdo Champions League, laakiin markii ay Chelsea ku guulaysatay Europa League, waxa uu sharciga UEFA booskii u soo bixitaanka Champions League ee ku guulaysiga Europa League uu siiyay kooxda kaalinta saddexaad kaga dhamaysatay horyaalka France.
Haddii ay Arsenal koobkan ku guulaysan lahayd ayayna kooxda Olympique Lyon hesheen fursada ay hadda ugu soo baxday Champions League, waxayna barteeda twitterka ugu dabaal degtay guusha ay Chelsea gaadhay ee ka caawisay in ay Champions Leauge u soo baxeen.
Guusha ay Chelsea gaadhay waxa kale oo ay faa’iido u noqotay kooxaha Istanbul Basaksehir iyo LASK Linz oo iyaguna guusha Blues kaga dheeraaday in ay isreeb reeb soo galaan.
Sidaa daraadeed, guushii Chelsea ee finalkii Europa League waxaa looga dabaal degay, France, Turkey iyo Austeria halka London qayb ka mid ahi oo ay Arsenal degan tahay murugo wayn laga dareemayo.